Kaspersky။Avira။Esetလိုင်စင် key များနှင် offline-update များ - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Kaspersky။Avira။Esetလိုင်စင် key များနှင် offline-update များ
Kaspersky Keys Kis Kav Pure 23 October 2011 ပါ Kaspersky သုံးသမားတွေစိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်
ထည့်နည်းတော့မပြောပြတော့ပါဘူး အထဲမှာလည်း ပါပြီးသားပါ (အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားပါတယ်)
Download>>>http://www.4shared.com/ (or) http://www.ziddu.com/ (or)http://www.diskme.com/ (or)http://ifile.it/
ဒါကတော့ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းကနေရှာထားတာပါhttp://www.fileserve.com/ (or)http://depositfiles.com/
နောက်ထပ်ကီးတွေအသုံးပြုချင်သူအတွက်ကတော့ ကီးတွေ့ကို Update လုပ်ထားတဲ့မှုရင်းလင့်လည်းပါတယ်
ဒါပေမယ့် Kaspersky ကပိတ်ထားပါတယ် ပြန်ဖွင့်ရတဲ့ နည်းပါတစ်ခါတည်းပါတယ်ဗျာ သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Avira သုံးသူအတွက် key ပါ
Avira အသုံးပြုသူတွေစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် download လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Download>>>http://www.diskme.com/ (or)http://www.ziddu.com/ (or)http://ifile.it/ (or)http://www.4shared.com/ သူငယ်ချင်အားလုံးအဆင်ပြေကျပါစေဗျာ
Avira နဲ့ပက်သက်ပြီး နောက်ထပ်လက်ဆောင်ပေးချင်တာက တစ်နှစ်ခွဲလိုင်စင်ပါ သူကတော့တရားဝင်ပေးထားပါတယ်
Your personal Key: GNBBB-BBBEN-FSWR5-LU3ZA-GV63T
သူကတော့ တစ်ယောက်ဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် အရင်ဆုံးတွေ့တဲ့သူအမြန်ဆုံးယူပြီး ထည့်လိုက်ဗျာ
တစ်နှစ်ခွဲလိုင်စင်အကောင့်လျှောက်တာ မလွယ်ဘူး ရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်စမ်းလျှောက်လိုက်တာ
တစ်ပတ်ကြာမှ သူက လိုင်စင်ပို့ပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ကိုမသေချာလို့ မမျှဝေဖြစ်တာပါ ကံကောင်းပါစေ
Avira စပြီးအသုံးပြုသူတွေအတွက် offline-update ပါ Avira offline-update ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကို Manual update ကနေ ထည့်နိုင်ပါတယ်အဆင်ပြေကျပါစေ
နောက်တစ်ခုကတော့ Eset Nod32 Antivirus Key ပါ Eset အသုံးပြုသူတွေအတွက်သတင်းကောင်းပေါ့ဗျာ
ESS / EAV Valid until:. 2012-01-26
EAV Valid until: 2012-04-23
ESS Offline Update
EAV Offline Update
eset-anti-virus-offline-update မထည့်တတ်ရင် offline-update ထည့်နည်း မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်
နောက်ထပ် တစ်ခုကတော့ BitDefender Offline updates ပါ bitdefender စပြီးအသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ File Size 129.25/129.94 Mb
Offline antivirus updates for BitDefender Total Security, Internet Security and Antivirus Pro 2012.
File Size : 128.74/ 129.47 Mb
(ထည့်နည်းတော့အသုံးပြုတဲ့သူတွေသိမယ်ထင်ပါတယ်) ကျွန်တော်မသိပါဘူး သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေကျပါစေ
နောက်ထပ် offline-update တစ်ခုကတော့ Avast ပါ
Avast ဟာ လှိုင်းခိုးတဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပဲအပြင်ကနေ၀င်လာတဲ့ဟက်ကာတွေကိုလဲကာကွယ်နိုင်သလို အင်တာနက်လှိုင်းဆွဲအားလည်းကောင်းတယ်ဆိုပဲ ကြားဖူးတာပြောတာနော် ဟီးး
သုံးနေသူတွေအဆင်ပြေတာပေါ့ Download>>> http://download854.avast.com/iavs5x/vpsupd.exe
နောက်ထပ် offline-update တစ်ခုကတော့ Norton AntiVirus ပါ http://www.symantec.com/business/security_response/definitions.jsp